Tobia 2 - Ny Baiboly
Tobia toko 2
Tobia: fitiavany namana, hajambana nanjo azy, fitiavany vavaka nandritra izany fahoriana izany.
1Taty aorian'izany, tonga ny anankiray amin'ny fetin'ny Tompo, ary nanomanana sakafo lehibe tao an-tranon'i Tobia, 2ka hoy izy tamin'ilay zanany: Mandehana ary mitondrà mankaty olona vitsivitsy iray foko amintsika, izay matahotra an'Andriamanitra, hiara-misakafo amintsika. 3Dia lasa ilay zanany; nony niverina izy, dia nilaza taminy fa misy zanak'Israely anankiray, novonoin'olona, ka mitsitra foana ao an-dalam-be ao. Nitsangana niaraka tamin'izay Tobia, niala tamin'ny latabatra, navelany teo ny sakafo, tsy nihinana izy na dia kely aza; nony tonga tany amin'ilay faty izy, 4nalainy io, dia nentiny nafenina tao an-tranony, haleviny amim-pahamalinana, rahefa maty ny masoandro. 5Avy nanafina io izy vao nisakafo, tamin-kovitra aman-dranomaso, 6fa tsaroany ilay tenin'ny Tompo nolazainy tamin'ny vavan'i Amosa mpaminany hoe: Hanjary fitolokoana amam-pisaonana ny andro fetinareo. 7Nony maty ny masoandro, dia nivoaka nandevina ilay faty izy. 8Nanome tsiny azy avokoa anefa ny olona manodidina azy, nanao hoe: Efa nodidiana hovonoina ho faty hianao noho izany ihany, ary vao afaka tamin'izany fanamelohana ho faty izany hianao, dia manomboka mandevina ny maty indray! 9Andriamanitra anefa no natahoran'i Tobia noho ny mpanjaka, ka nalainy ihany ny fatin'ireo novonoina, nafeniny tao an-tranony, dia naleviny nony alina.
10Indray andro, nony tonga tao amin'ny tranony izy, ilay sasatra loatra avy nandevina ny maty iny, dia niretaka teo ambody rindrina; ka nosintonin-tory. 11Mbola natory teo izy no nisy tain-tsidintsidina mbola mafana nilatsaka avy any amin'ny akaniny, teo amin'ny masony roa ka tonga jamba izy. 12Fitsapana navelan'Andriamanitra hihatra aminy izany, mba ho atao fakan-tahaky ny taranaka any aoriana ny faharetany, toy ny an'i Joba lehilahy masina. 13Fa satria hatramin'ny fahazazany, no natahorany an'Andriamanitra, sy nitandremany ny didiny mandrakariva, dia tsy mba nanana alahelo tamin'Andriamanitra izy, tamin'izany azon-doza tonga jamba izany; 14fa naharitra tsy azo nohozongozonina tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izy, nisaotra azy isan'andro nandritra ny andro niainany. 15Toy ny nanebahan'ireo loham-pirenena an'i Joba, lehilahy sambatra, no nanarabian'ireo havana aman-tsakaizan'i Tobia ny fitondra-tenany, 16nataony hoe: Fa zary inona ity fanantenanao, tamin'ny nanaovanao fiantrana sy nandevenanao ny maty? 17Nanarin'i Tobia izy ireo, nataony hoe: 18Aza miteny toy izany fa zanaky ny olo-masina isika, ka ilay fiainana tsy maintsy homen'Andriamanitra an'izay tsy mitsoaka na oviana na oviana amin'ny firaiketam-po aminy no antenaintsika.
19Anna vadiny nandeha isan'andro, nanenon-damba, ary izay mety ho azony, tamin'ny asan-tànany dia nentiny niverina hiveloman'izy ireo. 20Toy izany no sendra nandraisan-dravehivavy zanak'osy, ka nentiny tao an-trano. 21Nony nandre ny fibarareok'ilay zanak'osy ny lahy, dia nanao hoe: Jereo, fandrao zanak'osy nangalarina izany, ka avereno any amin'ny tompony, fa tsy mahazo mihinana na inona na inona avy amin'ny halatra isika, na dia mikasikasika izany akory aza. 22Izay, dia novalian'ny vavy an-katezerana hoe: Miharihary fa foana tokoa ny fanantenanao; izany no vokatry ny fiantranao? 23Izany sy ny toy izany no teny fikizahany azy. >